Igcisa liguqula iilogo zebrendi ye iconic yexesha le-coronavirus | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimpawu ze-iconic ziyilelwe kwakhona ixesha le-coronavirus
Izolo sifunde malunga nomxholo omkhulu womsebenzisi wedwa ekuhlaleni uphawu lweGoogle, ukuza kuthi ga ngoku kwisindululo sabanye amagcisa phinda uyile iilogo ezibonakalayo zexesha le-coronavirus.
Kwaye ukuba sithi kungenxa yenyani yokuba le ntsholongwane itshintsha yonke into kwaye asikayazi nefuthe eliza kuba nalo kuluntu nakwinkqubo yeli hlabathi kwiinyanga ezizayo. Makhe sizibone ezi zindululo zingaphezulu kunokubona igalelo elikhulu loyilo.
UJure Tovrljan ngumculi onayo uthathe ezi logo zodidi kunye nobungqina bokwenyani ekuhlaleni esikubonile izolo ngokufanayo kwesinye isicelo sikaGoogle. Eli gcisa lidlala ngendawo, umfanekiso kunye nophawu lokwenza uluhlu olulungileyo lweempawu ezimangalisayo nezishukumisayo.
Singayifumana ifayile ye- i-mastercard okanye ii-olympic imidlalo icon, okanye ezifanayo kwi-NBA okanye kwi-Starbucks. Umdlali we-NBA unomdla xa engena endaweni yomdlali webhasikithi kule khasethi ekhethekileyo yokumsa kwiLaptop. Umfanekiso onomdla kodwa obonisa ubunyani babaninzi kwihlabathi liphela.
Kukho ilogo ye I-Starbucks enala maski loo nto yenza ukubalasela kwayo kwi-logo yayo, okanye ukuba ilogo yeGoodyear iba yiyo ka-Badyear. Ingenantlonelo kwaye iyacaphukisa ngokufanayo. Okuhlekisayo kukwaluphawu lwebhiya oludumileyo apho ungabona khona "lifuna igama elitsha."
Un mzuzu owodwa kwimbali yoluntu ukuba yonke into ihleli injalo kwaye ngubani ekufuneka ephile. Apha eMadrid, ukusuka apho le mizila ibhalwe khona, itshixiwe kwaye ngaphandle kokushiya ikhaya, kuthenjwa nje ukuba kungekudala sizokwazi ukuthatha izitrato kwakhona kwaye sikwazi ukujongana kude kancinci; Masithembe ukuba ukwangiwa kulandelayo kwaye yonke into ibuyela esiqhelweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iimpawu ze-iconic ziyilelwe kwakhona ixesha le-coronavirus
I-Slack ityhila eyona nto iphambili yoyilo ngokutsha
I-doodle kaGoogle enobuchule bokusasaza eluntwini eyenziwe ngumsebenzisi